Nyaya yeHwaro hweSarudzo Yosviriridza muZimbabwe
Ndira 20, 2011
Nhumwa dzemutungamiri weSouth Africa, uye vari muyananisi mugakava reZimbabwe, VaJacob Zuma, dzinonzi dzakapiwa nemapato ezvematongerwo enyika zvaanoda kuti zvive muhwaro hwesarudzo, kana kuti elections road map, uho hunonzi huri kurongwa naVaZuma.
Nhumwa idzi dzanga dziri muZimbabwe svondo rino, uye dzakasangana nemasachigaro matatu ekomiti iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, pamwe nevamiriri vemapato ose ari muhurumende.
Kunyange hazvo pave nehurongwa hwekuumbwa kwehwaro uhwu kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, hapana zviri kuburitswa zvakawanda pamusoro pemisaridzirwa yeGlobal Political Agreement, kana kuti GPA.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kunetsana muhurumende nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamusoro pemafambisirwo anofanirwa kuitwa zvinhu muhurumende yemubatanidzwa.
VaTsvangirai vari kuti VaMugabe vari kuita humbimbindoga pakudoma vakuru muhurumende vakaita semagavhuna ematunhu, vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika, pamwe nevatongi vematare edzimhosva epamusoro.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kusagadziriswa kwemisaridzirwa iyi zvimwe zvezvinhu zvinogona kukanganisa zvakare hwaro hwesarudzo huchaburitswa naVaZuma.
VaTsvangirai vakabuda pachena vachiti havasi kufara nemasarudzirwo akaitwa makomishina eZimbabwe Electoral Commission, iyo ichange ichifambisa sarudzo dzinofanirwa kutevedza hwaro hunenge hwatarwa naVaZuma.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vanoti hwaro hwesarudzo uhu hunofanirwa kutsigirwa nemapato ezvematongerwo enyika vachiremekedza zviri muchibvumirano cheGPA kuti hukwanise kushanda.